Mmeghachi omume na Cable Car Project na Sanliurfa | RayHaber | raillynews
[01 / 05 / 2020] Ijeri mmadụ ise nwere ike iru afọ abụọ nke na-agaghị ejedebe na enweghị Corona	General
[01 / 05 / 2020] Oti mkpu agha Coronavirus na ndị agha Russia	7 Russia
[01 / 05 / 2020] Atatürk Urban Forest Annunciation si Imamoglu ..!	34 Istanbul
[01 / 05 / 2020] Ozi di, WHO Explained Turkey si Fight Megide Covidien-19	06 Ankara
[01 / 05 / 2020] Ijikwa Coronavirus dị Irè na Ebe Ọrụ	06 Ankara
HomeTurkeyAla nke Anatolia Region63 SanliurfaMmeghachi omume nke ụgbọ ala na Sanliurfa
Mmeghachi omume nke ụgbọ ala na Sanliurfa
06 / 11 / 2017 63 Sanliurfa, Ala nke Anatolia Region, General, Gondola, TELPHER
Mmeghachi omume maka ọrụ Teleferik nke obodo Metropolitan ga-ewu na Şanl ​​continuesurfa na-aga n'ihu. Na Şanlıurfa, ndị nnọchi anya NGO, ndị na-ede akwụkwọ na ụmụ amaala na-emegide ọrụ ahụ maka ezi ebumnuche.
Otu n'ime ọrụ Nihat Çiftçi n'oge Karaköprü Municipality, Obodo ukwu nke Metroplaitan, nke bụ pasent 50 onye ọrụ aka na etiti Karaköprü site na nhọpụta ya na Obodo isi obodo ahụ, kpebisiri ike ịrụ ọrụ ụgbọ ala eletriki ahụ n'agbanyeghị mmeghachi omume ya.
Baydilli hapụrụ ya.
Karakara nke Karaköpr which, nke ya na X-50 nke oru ngo a, wezugara mmekorita ya na ọrụ ụgbọ ala USB. Mayor Baydilli, 23-24 nde TL ga-abụ ihe kpatara ịhapụ ọrụ a, '' ọnụọgụgụ dị elu maka mmefu ego nke Mgbakọ District, '' kwupụtara.
Agencylọ ọrụ mmepe ga-enye onyinye.
Site na mwepu nke ọrụ ahụ na Karaköprü na-achọ ego mmefu ego ọhụrụ, ,lọ Ọrụ Karacadağ achọpụtala ihe ga-edozili ya. Agencylọ ọrụ mmepe, pasent 50 nke ọrụ ahụ kwuru na onyinye ahụ.
Mmeghachi omume anaghị akwụsị.
Ọtụtụ ụmụ amaala meghachiri ọrụ ahụ n'ihi ebe o bi na Şanlıurfa. Ndị nchịkọta akụkọ nke MEDYAURFA.COM natara echiche nke ndị na-ede kọlụm na ndị isi NGO metụtara ọrụ ahụ.
'' A ga-elele mmetọ nke ihe oyiyi '
Onye isi oche nke Sanliurfa Cultural Heritage Association Association Uğur Beyazgül, onye buterela ọtụtụ nsogbu dị mkpa nke obodo ahụ, kwuru, sị: 'Ọnọdụ adịghị mma maka ụdị a. N'ikwu na ebumnuche iji rụọ ụgbọ ala USB nwere ike ịbụ maka njem nlegharị ma ọ bụ ebumnuche njem, Beyazgül kwuru, Ulu Dị ka ọ dị na Bursa Uludağ, ị ga-elele ndagwurugwu ndị dị na ụgbọ ala USB, ma ọ bụ, ị ga-arịgo n'ugwu maka njem. N'ime ebe dị ka nke a na-eme atụmatụ na Karaköprü, ụdọ ahụ enweghị isi. Ọ dịghị ihe ọzọ ọ bụ karịa mmetọ eke. Ndị mmadụ ga-ekiri mmetọ ihe oyiyi ahụ n'ụlọ ụlọ ebe ụgbọ ala USB na-agafe. Emere nnyocha ahụ na mgbasa ozi mmekọrịta na mgbasa ozi ndị ọzọ. Nsonaazụ ahụ adịghị elu. Atụmatụ ọrụ okporo ụzọ maka ọdịnihu nke Sanliurfa tupu emee atụmatụ ụgbọ ala USB, '' ka o kwuru.
'M ga-ebuga ya n'ụlọ ikpe'
Sanliurfa na-ekwupụta banyere nsogbu nke obodo na-eme ka a mata isi okwu nke onye edemede Sabri Gear '' Ọ bụrụ na mmefu ego nke ime obodo abụghị ego, mana ọ bụrụgodị na mmefu ego obodo 1 pound fuzulid m '' ka o kwuru. N’igosi na odighi ike iwepu ya n’obodo mana Gear ’’ Ebe adighi anya dika ihe nlere. Obodo adịghịkwa ahụ anya nke nnụnụ. Onweghi ihe nlere ebe ozo. Pezọ ndagwurugwu dị na Gaziantep, mana ebe a na-elele bụ ndagwurugwu ahụ. Enweghị ihe owuwu. M ga-eburu okwu a n'ụlọ ikpe, '' ka o kwuru.
Pịa ka ị gụọ ọzọ.
Isi: m www.medyaurfa.co
Usoro nke Tramway anaghị ekwe ka Òtù Nhazi Ọchịchị
Nzaghachi nke Bursa na oru ohuru ohuru
Nkwupụta nke obi ebere: Sanliurfa ropeway mmemme mbido ịbịaru ọrụ ga-ewere
Nzaghachi site na Gümüşhan gaa na ebe a na-arụ ọrụ na ndagwurugwu Of-İyidere
Nzaghachi na Tram Project na Izmit
TCK 9. Mpaghara Sanliurfa - Akcakale ụzọ dịgasị iche iche na-arụ ọrụ dị nro
Şanlıurfa Na-achọ Azụmahịa Site Winter njem
Ụgbọ njem Sanliurfa na-eru nso na njedebe
TCDD Mürşitpınar-Şanlıurfa Railway Project Survey, project, engineering na ve
Ngwaọrụ ụgbọ ala ụgbọelu Şanlıurfa
Obodo nke Karaköprü
Antalya 3. Ndị 13 puku mmadụ 287 nọ na Reta System Referendum
Taa na History: 7 November 1941 site na Diyarbakır na Elazığ ọdụ ...
IETT Ga-ahazi Mgbasa Ozi 3 Maka Ndị Ọkachamara Ahụike Ahụ Ike Na Nchịkwa ụbọchị 105
Ijeri mmadụ ise nwere ike iru afọ abụọ nke na-agaghị ejedebe na enweghị Corona
Oti mkpu agha Coronavirus na ndị agha Russia
Automobile Unmanned KBRN Reconnaissance Vehicle si HAVELSAN
Laborbọchị Ndị Ọrụ Obi Happytọ, Mee 1, ofbọchị ilgbọ Mfe na Njikọ
Ekwesịrị iji okporo ụzọ Baku Tbilisi rụọ ọrụ nke ukwuu
Nweghachi nke Kırklareli Historical Station Building Amalite
Başakşehir Kayaşehir Metro Line ga-abụ nke Mịnịstrị ahụ!
Na Norway Na Nzọghari Ọkwa, Tragbọ oloko ahụ na-ebu ngwongwo na-ebu
Ekesaara Ndị Ahịa Provid na-enye Ọrụ Na-ebugharị Ọha na Van
E kesara ndị ahịa nọ na Ordu mkpu mkpuchi
Atatürk Urban Forest Annunciation si Imamoglu ..!
Nkwupụta nkwari akụ: A ga-arụ ọrụ Shotcrete na Bridges na Culverts
Mee 6 @ 10: 00 - 11: 00
Nkwupụta maka ọmịiko: Mmelite Sistemụ Mgbanwe Ekwentị Sivas na Ọrụ chazụta Ngwaahịa
Mee 7 @ 14: 00 - 15: 00
Nkwupụta Obi Ụtọ: A gha ịzụta ọka
Mee 8 @ 14: 00 - 15: 00
Nkwupụta maka ọmịiko: Raft, Radiebrit na mgbidi nke okwute dị na mkpọchi na akwa dị n'etiti Adana-Toprakkale-İskenderun na Toprakkale-Fevzipaşa-Narlı
Mee 11 @ 10: 00 - 11: 00
Nkwupụta Okike Oma: Aydın Denizli Highway Construction
Mee 12 @ 11: 30
Nkwupụta maka ọmịiko na ntanetị: Raft, Radybrit na Nkume nke Rock na Mgbada na Udiri dị n'etiti Ulukışla na Yenice
Mee 13 @ 10: 00 - 11: 00
Anma ọkwa nkwụghachi ụgwọ: Aluminothermic Rail Welding Work
Mee 14 @ 14: 00 - 15: 00
Nkwupụta Obi Ụtọ: Zụrụ Ciment
Mee 14 @ 14: 30 - 15: 30
Keltepe Ski Center Na-akwado Maka Oge Udu mmiri
Boztepe na-akwadebe maka Oge Ugbo
Büyükkılıç kwuru nkwupụta banyere post-coronavirus na nzuko Erciyes
Buru onye mara maka oge ahia ji abanye Uludağ USB tashar ugbo ala
A ga-ewu Hakkari Merga Butane Ski Center 130-Bed Hotel
Okporo andzọ na Bogbọala Jikere Maka Oge Ezumike na Eskisehir
Elinweta ụmụ nnabata nke ụmụaka 5.56 karịrị 65.000
A ga-anwale ụgbọ oloko eletriki nke Mba Mee 29
Tram dara bọs IETT Istanbul na Istanbul 2 merụrụ ahụ
Ha kwuru na Metrobus agafeghị nkeji iri atọ ..! Nke a bụ Eziokwu
Nomad meriri na YHT Ọwara n'okpuru Ihe owuwu na Bilecik
Turkey si Kovid-19 fọdụrụ mgbe efu square anya si ohere
Nkeji Ikpeazu ..! Abụọ Metrobus Collide Isi na Isi na Avcılar!
Onye isi ala Imamoglu Alibeykoy emeela Datebọchị maka Eminonu Tram Line
Maapụ ndị na-eme ka ndụ dị mfe nhịahụ na ANKARAY Stations
Ekele Kanuni Boulevard si Mayor Zorluoğlu
IMM Asphalted isi ihe dị mkpa na Istanbul N'oge Oge Mgbaghara
Ankara na-eweta Newzọ Ọhụụ Na Oge febọchị 4
Saudi Arabia ga -emepụta egbe egbe ndị Turkey site na 2021
Eurasia Airshow 2020 Fair Eyigharịrị na December
Covidien-19 mmetụta nke Turkey si Defense na Aerospace Industry
Gburugburu 2 bụ airborne si US si Turkey Sincan Medical enye Aircraft ụgbọelu
Oyak Renault bidoghachiri ọrụ na 7 puku ndị ọrụ
Ọ dịghị Oge na Turkey dị Domestic Car tOGGer
Oyak Renault Ga-amalite Mmepụta Ọzọ
Mmetọ ikuku na-eme ka mmetụta Coronavirus dịkwuo elu
Ezọ EGO Ego Nke EGO Ego Nke Ndị Isi Ọrịa
Warndọ aka na ntị gbasara TCDD na Istanbul Tekirdağ Railway!
Sterịn na EGO Buses dị ugbu a na ụmụ nwanyị
Oge IETT Mmemme Na-etinye Onwe-Izu na Istanbul
Oge awa bọs gbanwere na Curfew na Bursa
Mee 1 Alert si na IETT
Oge Bus na Tram Oge Oge Oge Na Kayseri